musha OCEANIA FOOTBALL STORI Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yebhokisi yebhokisi inonyatsozivikanwa neNickname; 'Timmy'. Nhoroondo yedu Tim Cahil Childhood pamwe ne Untold Biography Facts inokutaurira zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Pasina mubvunzo, Tim Cahill anoonekwa somumwe wevashandi vekuAustralia vanobudirira zvikuru. Iye zvino inodha dive mumunhu wake.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga
Cahill akaberekwa musi wa 6 December 1979 muSydney kune baba veChirungu vaibva kuIrish (Tim Cahill Snr) uye Samoan amai (Sisifo Cahill).
Akakurudzirwa kutamba bhora semwana, kunyange zvazvo akakurira mune chikuru kwazvo rugby league-kutevedzera mhuri. Pasinei naizvozvo, Tim akafarira Football. Chimwe chezvinhu zvaaifarira chaizvo zvaiva kuona Barclays Premier League. Zvakanaka, aigona kuita zvakaitwa nevaAustralia vazhinji zvakaoma kuita. Iko kuramba wakamuka paawa yakafa yeusiku (12: 00 pakati pousiku- 4: 00 am) kungotarisa imwe sendimi imwechete yechirongwa ichi.
Sezvo panotarisana nebhola, nheyo huru yeAustralia neBritish yakapedza vazhinji kubva pakuona mutambo. Senguva duku ye5 yemakore, akakurira kutsigira kambani yeBeverton. Ikobhu yacho iri pakati peC80 inotungamirirwa nebhokisi reChirungu. Vakakunda hurukuro yehurumende munguva ye 1985 / 1986 uye 1986 / 1987 semwaka. Tim akakurira akatarisa uye achidzidza kubva kuna Everton, Gary Lineker.
Sezvo mwana muduku, zvakanga zvisingagamuchirwi kuti ave wakamuka paawa yakafa yeusiku. Tim Cahil aifanira kutsvaga mvumo yakakosha yekukwira pakati peusiku kubva kuna baba vake vokuBritain akaberekerwa uyo aivawo mutsigiri mukuru weChirungu webhokisi. Saka vose vari vaviri vakarinda pamwechete. Maererano naTim,
Handisi kunyatsoona mafirimu. Ini ndichazogona kutamba kana kutarisa Barclays Premier League Football. Ndinonakidzwa kutarisa mitambo muLigian Premier League semwana. Ndizvo zvandinozorodza. Ndinogona kugara ndichiona kuputika mumigwagwa ... ye Premier League football kunyange World Cups nezvimwe zvakadaro. Ini waiva nekutya kwevatambi vezvemhizha kumashure ipapo. Ndakaonga tarenda ravo, " akati.
"Kare kare semubati wechirwere, ndinofunga pamusoro pekuoma kwaiitwa kuti ndiende pachikamu ichocho, uye kana ndiripo, ndinotarisa-svetuka ndozviona ndichikwira mumugwagwa uye ini ndimire pedyo neRuud van Nistelrooy, m amire pedyo naT Thierry Henry, Robby naRoy Keane, Owen, naRobert Pires. Ndiko panguva iyo ini ndinozviudza ini, kuti "Wow, ini ndakazozviita muupenyu". Ipapo ndinozviudza zvakare, "tiyi handiyo nzira yandinobva nayo iyi pasina imwe yejeresi yavo "."
Izvo zvakakodzera kutaura kuti vabereki vaTim Cahill vakaita chimwe chezvibayiro zvakakura kuti vamuwane iye kumusoro. Izvi zvichatsanangurwa muchigamba chakareba. Vabereki vake vanoda rudo rwake.
Akakwanisa kutarisana nemasikati ose uye asati achiratidza chero chiratidzo chehope panguva yezuva. Akanga ari kunyange akakurumbira mukirasi yake yaiti vabereki vake.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Kubva Rugby kusvika kuBhola
Tim Cahill akakurira akapoteredzwa nebato rake rakagadziriswa riri kutamba vana vanun'una vake vakamubvumira kukanganwa bhora uye vanotanga pamutambo wavo. Somukomana muduku, dzimwe nguva akavatevera kuti vatambe Rugby. Haana kuzviita nokuti aida mutambo, asi nekuda kwekuda vazukuru vake.
Iwe baba vake (Tim Cahill Snr) aida kuti ave chinhu chaaida kuva. Yaiva mai vake (Susifo) avo vakaramba zvakasimba mwanakomana wavo achiita Rugby. Aitya mutambo wacho waiva nengozi uye mwanakomana wake aigona kukuvadzwa zvakanyanya kubva pairi.
Asi mushure mekunge achinyanya kunetseka pamusoro pekutya kwake kwevatambi vakawanda vachikuvadza mwanakomana wavo, akamanikidza murume wake kumutora kuenda kune zvaaireva se "Mitambo yakachengeteka" yebhola. Hazvina kutora kwenguva yakawanda pamberi pehanzvadzi yaTim mudiki Sean achitevera ibhodhi rimwechete.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Maitiro aakaenda kuEngland
Vabereki vaviri (Tim Cahill Snr naSisifo) vakatsvaga pamwe chete chikwereti che $ 10,000 kuti vawane mumwe wavo mwanakomana kuEngland. Vakasarudza kuti yaizova Tim nekuda kwerudo rwake rurefu rwechikwata cheChirungu. Mhuri yakasarudza kuti yaizova mukana wake wega wekuratidza tarenda yake yeAustralia. Vakagadzira pfuti nemapureti nemwanakomana wavo, Tim akaenda kuLondon kuti aite miedzo neMillwall FC mugore ra 1998. Mhuri yake yakange yakaputsika mushure mokufamba Tim. Mukoma wake muduku aifanira kusiya chikoro kuti awane basa. Akaita izvozvi kubatsira rubatsiro rwemari kumba.
Maererano naTim, "Kusvikira nhasi, hapana zuva randinofunga pamusoro pazvo. Ndinozviti iro ruvara rwakanaka, " akati.
Mhuri yake yakaoma mune zvemari kuti ishumire chikwereti chavo mushure mekunge yaenda. Vose vari vaviri vakashanda kwemaawa asingatyi mufekitari uye vaiva nehutano hwakaderera hwehupenyu kusvikira mwanakomana wavo aita.
Maererano naamai vake, "Hatina chakanaka chemari. Hatina kuwana mari kuti timuone kuburikidza nehope dzake. Saka taifanira kutora chikwereti. Takava nemhosva kwemakore. Tiri kufara chibayiro chedu chakabhadharwa. Zvose zvataida ndezvokuti iye ave akabudirira semutambi wenhabvu aizotamba muItaly League. Kufara kwakaguma kuburikidza ne "
Apo Cahill akasvika kuEngland akachera imba imwe yeimba yekurara. Akarwa zvakaoma kuti abudirire mumatambudziko ake. Nokuda kwekuti, kuedza kwake kwakabhadharwa. Akasayirwa naMillwall mugore re 1998. Mubhuku rake 'Tim Cahill Legacy', akanyora kuti akatumira mapepa e5,000 achinyora mari yakakwana pamba sechikamu chekubhadhara chikwereti.
Iwe mubhadharo webhobhoza yake yaive yakaderera. Akaramba achiponesa kushanda chikwereti uye akatumira 5,000 mapaundi kumba. Mhuri yacho yakabva yaita kuti inotanga kuiswa pamba nemari yacho.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-The Rugby Family Connection
Tim Cahil ndiye munin'ina wa Samoan muchengeti uye mutungamiri mukuru weSamoa, Chris Cahill. Vakawanda vehama dzake vanobatanidzwa mubhodhi. Kushungurudza, vatatu vakoma vave vachiri kutamba mutambi wetsamba. Dzinosanganisira Ben Roberts (New Zealand Rugby League) ,, uye Jeremy Stanley (New Zealand Rugby Union).
Zvakare, vaviri vevanun'una vake avo vane nyanzvi yebhodhi yebhodhi, Chase Stanley uye Kyle Stanley dzakabatana neRugby Union vashandi Sam Stanley (Saracens & England U20), Mike Stanley (Samoya), Benson Stanley, uye Winston Stanley.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Tim Cahill akaroorwa nehutano musikana, Rebekah Greenhill muna May 2010. Vaviri vacho vakakurumidza kuva nevana vana pamwechete. Yakanga isiri iyo yemuchato weLas Vegas, asi yakagamuchirwa munyika inonzi yakakurumbira Bellagio Hotel inopfuura 50 inotsigira shamwari kutarisa. Pazuva romuchato wake, Tim Cahill akati kumudzimai wake; "Ndiwe mudiwa wangu wakanaka, zvose zvangu."
Tim Cahill anoti iye uye mudzimaikadzi Rebeka havana kumbobvira vaite chimiro chakanakidza nemudzimai uye mararamiro anotungamirirwa nezvinodiwa zvevamwe vheji nevakadzi vavo, kusanganisira David uye Victoria Beckham. Chinonyanya kukosha ndechekurarama hupenyu huri nyore, kushandisa nguva nguva nemudzimai nevana. Zvakakosha kuziva kuti Tim anoda kugovera nevana vake. Kwaari, "Vana zvinhu zvose"
Tim ane vana vana vanofarira chaizvo mitambo. Vatatu (3) vanakomana vainzi Kyah, Shae uye muduku pane vose vasina zita rakataurwa uye mwanasikana Sienna. Vose vanobva kumudzimai wake Rebekah Cahill.
Kuva wakakomberedzwa nevana vakanaka pavanopemberera nyuchi pamagumo zvinoita kuti Tim Cahill izadzike uye ifare. Mhuri yakakwana yakambotaura 'Mhuri ichauya nguva dzose isati yasvika'
"Kuwana kufara nemhuri yangu chinhu chimwe chete uye ndave ndiine hupenyu hwangu hwose. Zvose zvese zvinouya nazvo kunyange [yebhola] ndezvakaipa. Uyewo, mari, zvibvumirano uye zvinyorwa zvemapepanhau. Kunze kwemhuri, iwe unogona kutora zvose kubva kwandiri mangwana, ini ndichiri kufara. Saizvozvokuti mhuri yangu iri kurarama pamwe chete, ndizvo zvose zvinokosha kwandiri ".
Tim Cahill haaoni hupenyu hwake sechinhu chinokosha, pane kusarudza kutarisa pane zvaanoziva. Anoti vabereki vake vachimuisa mumamiriro ezvinhu apo aigona kutungamirirwa nevadzidzisi vane unyanzvi uye vane mikana yekutamba pamatunhu akasiyana - kunyange zvazvo vanhu vakawanda vakamuudza kuti akanga akanyanya kuva muchengeti wemhizha pane imwe nguva munguva .
Kunyange zvazvo Cahill akaberekerwa kuSydney, Australia, baba vake vanobva kuIrish vanozvarwa, asi vakagara muEngland munguva yehupenyu hwake. Cahill anowana bvudzi rake rakasviba kubva kuna amai vake avo a Samoan native.
Cahill anofungidzirwa kuti anga aine mukana wekumiririra Ireland nekuda kwababa vake, asi akangomiririra Samoa neAustralia chete international career.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Career Summary
Muhuduku hwake, Cahill yakatamba nebhokisi yeBalmain Police Boys Club, Marrickville Football Club, uye Plumpton / Oakhurst Soccer Club.
Akararama uye akadamba bhora muSamoa kwechinguva chiduku sechidiki. Akamirira sangano rebhora reSamoa raive muzera re14. Akaendeswa kuEngland mu1998 kutamba mutambo weMillwall FC. Sezvo nguva yakaenderera mberi, akazova nhengo inokosha yeMillwall's scuad. Cahill's popularity chete yakabviswa mumutambo we 2003-2004 apo akabatsira Millwall kuti asvike pakupedzisira kweFIFA Cup, asi kuti arasikirwe neManchester United 3-0. Izvi zvakakonzera kufarira muWeverton. Tim Cahill akaonekwa nevashambadzi veWestton uye muzhizha re2004 akatamira kuGoodison Park. Akapindira pakarepo uye akapedza nguva yacho sechetori weWestton uye akavhowa vatambi ve Everton mutambi wegore. Mugore rimwe chete, Akabatana neSocceroos, tende romuAustralia, mu2004. Mushure mokutamba na Everton kwemakore anenge gumi muChirungu Premier League, akatamira kuUnited States mu2012 kuti abatane neNew York Red Bulls. Ikoko, iye akapiwa Gold Boot neMVP mu2013. Yake yekupedzisira yaiva Shanghai Shenhua FC muChinese Super League. Mushure mekunge akaturika mabheti ake, aive akazvimiririra sehurumende yeUNICEF.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Murume akatambira tsika
Tim Cahill akauya nenzira yakareba muupenyu. "Kuuya kubva kuAustralia, kugara muLondon, Manchester, Liverpool, Sydney, New York uye zvino kuShailand, ndakazvibata sechinhu chinonakidza," anotsanangura.
"Ndakagamuchira tsika dzose, zvokudya, vanhu, mararamiro."
Asi nezvose izvi, Cahill anogara achiziva nezvezvibayiro zvemhuri yake yakagadzirirwa kuti atevere kurota kwake.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Runomhanya 2 Football Academies
Chimwe chinyararire chiri pamusoro pake ndechekuti, anomhanyira mabhuku maviri ebhora. Imwe muWollongong Australia pamwe nekubatana kweWollongong Police uye Community Youth Club, imwe iri ku Dubai iyo inomhanya pamwe chete neElite Sporting Academy. Zvose izvi zvakatanga mu 2009.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Hama Yakapfigirwa Kwematanhatu (6) Makore
Muna 2008, Sean Cahill akaiswa mujeri kwemakore matanhatu nekuda kwekurwa muBritain kwakasara iye akangobatwa zvishoma akapofumadza.
ake 'utsinye uye anotyisa' kurohwa pamunhu wake wakamuti ndiye murume ane ngozi muBritain.
Akatanga kutongerwa mhosva yekukuvadza mumuviri paCrodon Crown Court nekurwisa Chris Stapely, kubva kuOrpington, munaJuly 11, 2004.
Kuongorora kwakaratidzwa aigara achirova munhu ainzi Stapely mumusoro pedyo nehofisi yekatekisi muEast Street achimusiya aine chizivo nemeno akavhunika uye retina yakatsvaga muziso rake rokurudyi. Mukadzi Stapely, uyo akatambudzwa akatarisana nehupenyu hwekusaona uye haakwanisi kuenderera mberi nebasa rake semuongorori wevakawanda.
Coward Cahill akaramba achirwisana naMnu Stapely uye akatoenda kunyika yake yeAustralia asati asungwa zvakare muSydney, Australia.
Detective Constable Will Hope kubva kuBromley Police akati: "Mai Stapely vakamirira kwemakore matatu nehafu kuti vaone kururamisira kwechiitiko chinotyisa uye chinotyisa.
Sean Cahill akaramba kubatanidzwa kwake, kunyange pakatarisana nekumanikidzirwa kwehupupuriro hwezvenyaya. Akatongerwa makore matanhatu ari mujeri mushure mekutorwa kubva kuAustralia. Mutongo uyu waiva kubvumidzwa kwezvose zvaiitwa kuti aende naye kudare rekutonga.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Kutaura kuhama yake kusungwa nejeri
Mutevedzeri weAustralia akamboona nekupemberera kuburikidza nokuputika mauto ake sekuti akanga aiswa chikwata uye akazozviratidza kuti akanga achizvitsaurira chinangwa - wechipiri chaWestton mumutambo we 3-1 kuGoodison Park - kune mukoma wake Sean, uyo akaiswa mujeri kwemakore matanhatu kupofumadza munhu. Iyo ndiyo nguva yokutanga iyo Cahill yakagamuchira pachena mutongo.
Cahill akati: "Chaizvoizvo, ndeyehama yangu. Munhu wese anoziva mamiriro angu uye ini ndinongodada kuti iye anofara uye ini ndiri kufara uye ndiri kufunga nezvake nguva dzose. Mhuri yangu inoreva zvakawanda kwandiri uye ndizvo zvakaitawo kambani yebhola. Zvave zvisingambofungi asi zvakanaka. "
Mutauriri weAn Everton akasimudzira Cahill kubva kutsoropodza kuti mhemberero inogona kuonekwa seisina kukodzera.
Achitaura kuti aiziva vamwe vaisazofarira mutambo, mutauri akati: "Nhemberero dzezvinangwa nyaya yenyaya yega uye kusvika kune mutambi kuti asarudze, hapana-anonyora izvo mutambi anogona kuita chero bedzi achigara mukati memitemo yemutambo, chero bedzi zvisingabatsiri."
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Chinangwa chikuru cheAustralia Chikwata Chekuvhara
TIM Cahill's chinangwa chekushongedza heroes hachizivikanwe. Akanga ari mutambi wekutanga munhoroondo yekukwikwidza paZimbabwe Cups zvitatu zvakasiyana uye zvitatu zveAsia. Vatambi vasere chete munhoroondo vakawana paZimbabwe Cups zvitatu zvakasiyana: Cahill, van Persie, Arjen Robben, Roberto Baggio, Jurgen Klinsmann naLothar Matthaus. Pele naUwe Seeler vakaona paZimbabwe Cups ina dzakasiyana.
Pakazara, akawana zvinangwa zvishanu paWhite Cup.
Nezve 30 mitambo yenyika yose yaakagadzirisa chinangwa, Australia yakakunda 19, yakarasika shanu uye yakakwevedzwa nhanhatu. Zvinangwa zvake-yega-yemutambo chikwata che0.4875 chinomuisa 44th panguva dzose dzese pakati pevatambi vemarudzi ose ane zvishoma zviduku zve 20.
Zita rake rekutsvaga chinangwa chekupemberera chimiro hachina nyaya kune vanodhakwa nebhola.
Hapana Australia Akaona Sezvinangwa Zvakawanda Sezvaari KuNational Team.
Tim Cahill mumwe munhu akadzinga uye akararama nehope dzake ne Everton FC. Yakanga iri nguva yehupenyu hwake hwehuduku hwekutamba zveToffees.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Chinangwa Chirangaridzo Chekutengeserana Chinoenda Zvakaipa
Tim Cahill mumvuri wekutengesa mabhizimisi ekutengeserana kwaimbopambwa ne cheeky ball boy. enda-kunopemberera: enda kumusana wekona uye utange mumvuri bhokisi. Iko cheeky ball boy yakasarudza kukanganisa mararamiro eAustralia akashongedzerwa panguva yekupikisana kweMelbourne City kuCentral Coast Mariners.
Cahill jogged predictably kuenda kumakona emakona mushure mekuongororwa chete kuti aone kuti mukomana akanga akapenga ainge abvisa mufungu uye akafamba shure achidzivirira mumvuri wake bhokisi kuedza. Tim pakucherechedza izvi zvaifanira kuvhara mweya wakaonda.
Tim Cahill Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Q uye As
Chii chaunofarira nzira yekushanda?
Tim Cahill - "Ini handiri mutambi anogona kukwira mumunda wose wemaminitsi 90. Kwandiri kune chokuita nekuputika kuitira kuti kana mukana iwoyo uchisvika, ndinogona kukurumidza kukurumidza, svetuka kumusoro kupfuura mudziviriri kana kuti kuita maminiti mashanu sprint kuti atange bhora kutanga. Ndinoedza uye ndinozvinyora zvakare mubasa rangu rekurovedza kuitira kuti zvizhinji zvezvandinotarisa pane zvinoputika zvinoshambadza nezviedza zvishoma "
Ndeipi nhamba yako imwe kuenda-kune utano hwakanaka?
Kwangu usiku huno musati mutambo ndinoita chokwadi kuti ndinowana yangu carbs uye protein saka pasta nekoko ndiyo nzira yakanaka yekuita kuti muviri wangu uine simba rose raunoda kuti rive mutsara.
Ndeipi tsvimbo yakanakisisa yepamuviri yamakagamuchira kuva mutambi?
Kwandiri zvose ndezvekuziva nokutarisa muviri wako. Ndokusaka ndichiri kukwanisa kutamba pa 35. Izvo uye kudzidzisa zvakananga panzvimbo yako / basa rako.
Chii chave chiri chinhu chinokosha chebasa rako?
Kwandiri zvakaoma kusarudza pakati pekukunda kwekutanga kweNyika Yese Japani uye Cup yedu yeAsia inowanikwa masvondo mashoma akapfuura. Kukunda chikamu chinokosha chekuvhara sirivha kumunda wekumba chimwe chinhu ndichagara ndichitarisa chimwe chekuzvikudza kwangu nguva.
Chinangwa chawakawana pamusoro peNetherlands paWhite Cup chakanga chakanaka! Iwe iwe, chii chave chiri chinangwa chausakanganwa chawakawana kusvika musi?
Sezvinoshamisa sezvo zvaiva zvekukwikwidza neNetherlands, ndichiri kutarisa zvinangwa zvangu zvinopikisana neJapan muGermany 2006 sezvakanakisisa zvebasa rangu, kunyanya kukosha kwekukunda kwedu.
Chii chakasara kuti iwe uwane semutambi?
Ndiri kutarisira kuenda kuChina iye zvino neShanghai Shenhua uye nekukwanisa kuva neruzivo rwechokwadi kune chero chinhu chandakave nacho mubasa rangu kusvika ikozvino. Ndine chokwadi kutarisa kuti ndive neicho chaizvo zvakanaka kuchinja paki pamwe chete!
Kana iwe usina kutevera basa mubholabhoza, iwe ungave uchiitei pane kudaro?
Zvakaoma kutaura. Sezvo ndakanga ndiri muduku zvishoma ini ndinogara ndichida kuva mubhokisi. Ndinofunga kuti ndinogona kunge ndave ndakatengesa kune imwe nzvimbo.
Ndezvipi zvirongwa zvako kana wapedza kutamba bhora?
Ndine zvimwe zviitiko zvinonakidza kunze kwebhola randichazonyatsoona kuti ndichinyanya kupindira pandinopedza. Handifungi kuti handichazopindi mumutambo kunyange zvakadaro.
Chii chinonzi iwe uzivi kana uchiuya kune utano uye hutano?
Kwandiri ndizvo zvose pamusoro pekuenzanisa. Hongu, ndinodzidzisa zvakaoma, asi ini ndinoita kuti ndienzane nekutamba FIFA nevana vangu. Kana zvose zvandakaita zvidzidzisa zuva rose, ndingadai ndapisa ikozvino.
Iwe unofunga kuti vana vako vachazotevera mumakwara ako here?
Mwana wangu wechipiri mukuru, Shae, akanaka chaizvo. Ndinoda kuve nechokwadi chokuti ndinomupa nzvimbo yekuita nzira yake, kunyange zvakadaro, kwete kuisa zvinomanikidzira kwaari. Uye makore angu anopfuura 3 Cruz zvechokwadi anogovana nekushaiwa kwangu kwekuchengetedza!
Ndeipi chinhu chimwe chisingazivikanwi nevanhu vazhinji pamusoro pako?
Ndinoda kuimba uye mumhanzi. Mukomana wangu mukuru, Kyah ane izwi rinoshamisa uye vakoma vangu uye vazhinji vemhuri yangu vane nyanzvi.
Iye ane Bugatti Veyron 16.4, iyo yakasimba zvikuru, inodhura uye inokurumidza kumigwagwa yemutemo yemigwagwa munyika.